Mpanamboatra sy mpamatsy Wolfberry China | HEX
Miaraka amin'ny vokatra antipyretika sy antitussive.
Ny voankazo (antsoina hoe wolfberry amin'ny fitsaboana sinoa) dia manana fiasa mitovy amin'ny an'ny wolfberry any Ningxia; ny hodi-kazo (antsoina hoe digubar amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa) dia misy ny vokatry ny antipiretika sy ny famoahana kohaka.
Ny polysaccharide Lycium barbarum dia polysaccharide mora vaky amin'ny rano ary mpiorina manan-danja indrindra ao amin'ny Lycium barbarum. Ny habetsaky ny molekiola misy azy dia 68-200, izay nanjary teboka fikarohana tao an-trano sy tany ivelany. Anisan'ireny, ny fifehezana ny hery fiarovan'ny tena sy ny vokatry ny fanoherana ny fivontosan'ny Lycium barbarum polysaccharide no be mpandinika indrindra. Fikarohana marobe no naneho fa ny polysaccharide Lycium barbarum dia manana andraikitra hampiroborobo ny tsimatimanota, anti-antitra, anti-fivontosana, radikaly maimaimpoana, anti-havizanana, anti-taratra, miaro ny atiny, miaro ary manatsara ny asa fanabeazana aizana, sns.
Ny anarana simika dia 1-carboxy-N, N, N-trimethylaminohydantoin, izay mitovy amin'ny asidra amine amin'ny firafitry ny simika ary an'ny tobin'ny amine quaternary. Betaine dia iray amin'ireo alkaloida lehibe amin'ny voankazo, ravina ary taho. Ny vokatry ny wolfberry amin'ny metabolisma lipida na ny atin'ny anti-fatty dia ateraky ny betaine ao anatiny, izay mpamatsy methyl ao amin'ny vatana. Ny fikarohana momba ny Lycium barbarum betaine dia voafetra amin'ny fikarohana anatiny momba ny famaritana ny atiny, ny teknolojia fitrandrahana ary ny vokatra ara-batana amin'ny zavamaniry Lycium barbarum (fampitomboana ny fandeferana sira). Misy vitsivitsy ny fanadihadiana momba ny vokatra ara-panafody an'ny Lycium barbarum betaine